Atombohy ny automatisation marketing ho an'ny fianaranao an-tserasera hahazoanao ny varotra B2B bebe kokoa | Martech Zone
Zoma, Aprily 10, 2020 Zoma, Aprily 10, 2020 Micheal Habiger
Iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hahazoana vola amin'ny alàlan'ny online course na eCourse. Mba hampidirana ny mpanjifa ao amin'ny mailakao sy hanovana ireo fitarika amin'ny varotra ireo dia azonao atao ny manolotra webinars an-tserasera mivantana na misintona maimaimpoana ebooks, pejy fotsy, na famporisihana hafa hahafahan'ny mpanjifa B2B vonona hividy.
Atombohy ny làlana an-tserasera
Ankehitriny ianao dia nieritreritra ny hanova ny fahaizanao ho làlana an-tserasera mahasoa, tsara ho anao! Ny fampianarana an-tserasera dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra handefasana ireo vinavina amin'ny varotra avo lenta. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovam-pivarotana mandeha ho azy hanatanterahana ireo varotra ireo dia azonao atao ny mampitombo ny tahan'ny fiovam-ponao raha tsy ampitomboinao ny enta-mavesatrao.
Manapa-kevitra ny amin'izay hampianarina - Rehefa mampianatra kilasy, ohatra ny momba ny fitaovana mandeha amin'ny marketing ho automatique, dia tsara ny mampianatra zavatra izay tianao na izay anananao fahaizana manokana.
Fantaro ny mpihaino kendrenao - Samy mitady an'izany daholo ny rehetra sarintany iray izany dia hanampy azy ireo hampivelatra ny orinasany amin'ny sehatra manaraka. Na olona io na orinasa, dia tadiavin'izy ireo ny vahaolana, ny tombony ary ny valiny azo atolotra azy ireo ny fampianarana an-tserasera. Ny valiny nampanantenain'ny fianaranao an-tserasera dia tokony hasiana soritra mazava mba hahafahan'ny mpanjifanao mandray fanapahan-kevitra mazava momba ny fividianana.
Miezaha mamorona anarana ho an'ny làlan'ny serasera an-tserasera izay miresaka ny valiny farany irina. Ohatra, raha hampitombo ny fiovan'ny varotra ny mpanjifanao. Ny lohateny iray toy ny "Manaova varotra $ 5,000 voalohany ao anatin'ny herinandro latsaka" dia hahazo vokatra tsara lavitra noho ny "Ahoana no hampitomboana ny varotra ho an'ny orinasanao," ohatra.
Fantaro ny demografikao - Te hanolotra ny vokatrao ho an'ny olona liana manokana na vondron'olona ve ianao? Moa ve ny mpanjifanao tonga lafatra dia olona iray manana orinasany manokana, sy mpandraharaha an-tserasera na matihanina hafa? Fotoana izao hanontanianao tena hoe karazana mpanjifa inona no tianao hisarika ny dianao.
Mamorona drafitra lohahevitra sy lohahevitra manome lanja ny mety ho mpanjifanao - Mety misy ny hevitra tsara indrindra amin'ny làlana an-tserasera:
Fifindrana amin'ny asa vaovao
Mametraka ny asanao amin'ny dingana manaraka
Mampitombo ny vokatra sy ny famoronana mora foana ary amin'ny fotoana fohy
Mianatra teknolojia vaovao toy ny AI ary afaka mampihatra sy mampiasa azy haingana sy mahomby.
Fampitomboana ny fiarovana ny trano na ny orinasa.
Fampitomboana ny tahan'ny varotra sy ny fiovam-po miaraka amin'ny fizotran'ny varotra voaporofo na modely.
Pricing - Amin'ny vidiny dia azonao atao ny manova ny lalàna mifanaraka amin'ny ilainao. Mety ho hitanao fa sarany avo kokoa noho ny fampahalalana sarobidy omenao ary hahazo valiny tsara kokoa. Ny mpividy sasany dia hanome fanehoan-kevitra tsara kokoa raha toa ka mametraka taha ambony kokoa ianao noho ny omenao ho an'ny kely kokoa. Afaka foana ianao jereo izay hoentin'ny tsena.
Raha tsy mahazo ny valiny irina ianao dia azonao atao foana ny manova ny vidinao na manolotra tolotra izay hitaona ny mpividy hiditra ao amin'ny fantsom-pivarotana. Ohatra, azonao atao ny manolotra atiny mandritra ny 30 andro maimaim-poana ary avy eo manome atiny fanampiny na tolotra manokana amin'ny vidiny izay napetrakao.
Manamory ny lafiny rehetra amin'ny làlan'ny Internet
Mety ho sarotra ny mivarotra fampianarana an-tserasera. Ny fananganana fahatokisana sy fampisehoana ny antony tokony itokisan'ny mpanjifa mety anao dia zava-dehibe. Rehefa manolotra zavatra sarobidy ianao toy ny webinar fampahalalana maimaim-poana, mailaka mailaka, e-mail, na tatitra, izay misy fampahalalana azo ampiharina izay ho hitan'ny mpividy sarobidy aminy.
Mandritra ny fisoratana anarana voalohany dia azonao atao mpandinika fanadihadiana hahitana izay tena mahaliana azy ireo ary ampanjifainy manokana ny zavatra niainany nandritra sy aorian'ny fampianarana. Misy fitaovana fanarahana mailaka maromaro azo ampiasaina izay afaka mandeha ho azy ny asa toy ny fitandremana ny fifandraisana amin'ireo mailakao. Azonao atao ny mamorona endrika fisoratana anarana haingana ahafahan'izy ireo miditra tsy ny adiresy mailaka ihany fa ny anarany sy ireo faritra mahaliana azy manokana.
Maoderina mailaka hanaraka fitaovana mandeha ho azy, ohatra, mamela anao handefa mailaka tongasoa manokana momba ny lalam-pifandraisana an-tserasera sy ny fanolorana vokatra fanampiny mifandraika mba hitazomana anao eo anoloana sy ao an-tsain'ny mety ho mpanjifa. Amin'ny alàlan'ny kendrenao ny tsenanao, azonao atao ihany koa ny manangana fahatokisana raha toa ka hamoaka ny teny momba ny zavatra atolotrao ny mpanjifa ankehitriny sy taloha.
Ny fitaovana fanaraha-maso dia afaka manampy amin'ny famotsorana ireo ekipa fivarotana sy varotrao mba hananana atiny fanampiny sy fampielezan-kevitra ary hifantoka amin'ny fandraisana andraikitra tena mpivarotra izay hamaly ny mpanjifa mety sy ankehitriny ary hampitombo ny varotrao.
Automation izay afaka mampitombo ny orinasanao sy mampitombo ny varotra an-tserasera
Ny lisitry ny mailakao dia iray amin'ny fananana sarobidy indrindra sy matanjaka anananao amin'ny varotra ny lalam-pianaranao amin'ny Internet, ny famaranana ny varotra ary ny fampiroboroboana ny orinasanao. Amboary ny mailakao lisitra amin'ny alàlan'ny famoronana andriamby firaka izay hahatonga ny mpanjifa mety hanome anao ny adiresy mailakao.
Ny fanomezana azy ireo tena lanja amin'ny atiny maimaimpoana dia hahatonga azy ireo hanome anao ny mombamomba ny mailaka hanomezana azy ireo bebe kokoa ny zavatra atolotrao ary hitarika azy ireo hamaky ny fantsom-pivarotana sy ny taha ambony amin'ny:
Tantaran'ny fahombiazan'ny hafa izay nividy ny làlam-pianaranao sy ny valiny azony tamin'ny nandraisany izany.
Mazava ny famaritana ny valim-panadinana izay antenain'ny mpividy mety hividianana azy ireo rehefa maka ny làlan'ny Internet ianao.
Ny vidiny manokana, ny hetsika na ny tolotra hafa izay afaka mandrisika azy ireo handray fanapahan-kevitra momba ny fividianana.
Momba ny fanarahana Fred
Follow Up Fred dia extension chrome izay mandeha ho azy mandefa mailaka fampahatsiahivana amin'ny olona tsy mamaly anao. Ny sisa ataonao dia ny mamelona azy ary avelao ny Follow Up Fred hanao ny asa mafy ho anao ary raha misy olona manaraka dia mamaly ianao ary dingana iray manakaiky ny fivarotana.
Midira maimaim-poana amin'ny fanarahana an'i Fred
Tags: email marketing automationhanarakamanaraha fredfanarahanamailaka fivarotana
Micheal Habiger dia mpanoratra an-tserasera efa za-draharaha sy mpivarotra manana traikefa 6 taona. Manampahaizana momba ny varotra zokiolona ao amin'ny FollowUpFred.
Einstein: Ahoana no ahafahan'ny vahaolana an'ny Salesforce mitondra ny fahombiazan'ny varotra sy ny varotra